भीम रावलको प्रश्नः कर्णालीका जनतालाई केहि छैन, आइफा अवार्डलाई अर्बौँ रुपैयाँ? - Himal Dainik
भीम रावलको प्रश्नः कर्णालीका जनतालाई केहि छैन, आइफा अवार्डलाई अर्बौँ रुपैयाँ?
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेता भीमबहादुर रावलले सरकारले भारतीय चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सव (आइफा अवार्ड)का लागि सरकारले करोडौं रुपैया दिने निर्णयप्रति गम्भिर आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
यसअघि एशिया प्रशान्त शान्ति सम्मेलनको विषयमा आपत्ति जनाएका रावलले आईफा अवार्डको लागि एक अर्व दिन लागिएको विषयमा गम्भिर आपत्ति नाएका हुन्।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालको कार्यक्रममा आइतबार बोल्दै रावलले भने, ‘भारतीय चलचित्र पुरस्कार आईफाको आयोजनाका लागि काठमाडौं महानगरले ४४ करोड दिने, नेपालको करिब १ अर्ब लगानी हुने र त्यसलाई सरकारले स्वीकृति दिएको खबर सुन्दा आश्चर्य लागेको छ, हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक भए जान्न पाइन्थ्यो कि?’
उनले सरकारले नेपाली चलचित्रको लागि कति पैसा दिएको छ? भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने, ‘कुनै हिसाबकिताब छ? हामीले स्थान उपलब्धता र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने हो। उहाँहरुप्रति सद्भाव देखाउने हो। यत्रो रकम किन खर्चिनुपर्यो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु।’
कतिपयले यो अवार्डको लागि सरकारले सहयोग गर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रर्वद्धन र विकास हुने भनेर गरेको टिप्पणीप्रति आफ्नो असहमति रहेको रावलको भनाई छ।
रावलले अहिलेपनि कर्णाली प्रदेशमा सडक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको सुनाए। जनताको करबाट उठाएको यत्रो रकम अर्काको देशलाई किन खर्च गर्नुपर्यो भन्दै रावलले प्रश्न गरे।
उनले भने, ‘यो विषयमा पनि पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ । यसको प्रभाव र असरबारे छलफल हुनुपर्छ।’ पछिल्लो समय धेरै विषयहरु उठिरहेको सुनाउँदै यी समग्र विषयमा पार्टीभित्र गम्भिर छलफल हुनुपर्ने पनि रावलले आवश्यकत्ता महशुस गरे।
गत बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतीय चलचित्र महत्वसव आइफा अवार्र्डका लागि पर्यटन मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी ४४ करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेपछि यसको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ।